Saraakisha Booliska Galmudug iyo Puntland oo Gaalkacyo ku shiray – Radio Daljir
Saraakisha Booliska Galmudug iyo Puntland oo Gaalkacyo ku shiray
Febraayo 1, 2019 3:12 g 0
Saraakiisha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed ee ka howl-gasha degaannada Galmudug iyo Puntland ayaa kulan looga hadlayo xoojinta nabad-gelyada waxa ay ku yeesheen Magaalada Gaalkacyo.
Kulankan, oo ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ayaa is barasho ka dib waxaa lagu gorfeeyay sidii ay wada shaqayn dhow u yeelan lahaayeen Ciidanka Boliiska Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ka howl-gala degaannadaas iyo kuwa Puntland iyo Galmudug.
Saraakiishii ka qeyb gashay kulanka ayaa dhammaantood waxa ay soo dhoweeyeen isu imatinka dhex maray, iyagoo ka faallooday ahmiyadda ay u leedahay nabad gelyada, haddii la helo wadashaqeyn dhameystiran oo u dhaxeeysa Ciidamada Boliiska ee ka howl-gala Galmudug iyo Puntland.
G/sare Yuusuf Axmed Ciise, Taliyaha saldhiga dhaxe ee Gobolka Bari iyo Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ee Galmudug, G/sare , Cabdi Jaamac Cabdulle (Xabeeb) oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay, in ay wada shaqayn ka dhexeysa Labada dhinac, taas oo keentay in dhowr jeer ay qabteed Dad fal dembiyeedyo kasoo galay degaanno kale.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Tamarka iyo biyaha DFS oo Qardho gaaray (dhegayso)